Mareykanka oo duqeyn ku diley Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo duqeyn ku diley Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Ardaan Yare 30 December 2019
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeymo dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 29-kii Bishaan Saddex duqeyn fuliyeen oo laba kamid ah ay lala beegsadeen Xarumo Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Kuunya-Barow ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Mareykanka ayaa duqeyntaas waxaa uu sheegay in uu ku bur buriyey laba Gaari laguna diley laba Xubnood oo uu kamid yahay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo Magaciisa lagu sheegay Caliyoow Barrow,balse ay sheegeen in duqeyntaas aysan waxba ku noqon dad rayid ah.
William Gayler, oo ah madaxa howlgalada Ciidamada Mareykanka ee Africa, ayaa yiri “Tan iyo weerarkii ugu horreeyay ee Al-Shabaab ee sanadkii 2010, kooxdu waxay si naxariis darro ah u dishay boqolaal isugu jira la-hawlgalayaasha Afrikaanka ah ee AMISOM & xulafadooda,Shacab iyo dadka kale Waana khatar Caalami ah.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya,isla markaana uu la beegsanayo Xarumaha Al-Shabaab iyo Daacish-ta ka Soomaaliya ee ka howlgasha deegaannada Puntland.
Mid kamid ah dhaawacyadii loo qaaday Turkiga oo geeriyoodey
Al-Shabaab oo war kasoo saarey duqeyntii Shabeellaha Hoose Ganacsade lagu diley